မလေးရှားရှိ အရိုးဆိုင်ရာ ကုထုံးများ – ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်များ
Oရိုးကုပညာသည် လူသားများ၏ အရိုးနှင့် ကြွက်သားစနစ်ကို အထူးပြုသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကုပညာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါပြီး အရိုးရောဂါကုထုံးများ၏ ရှေ့တန်းပညာရှင်များမှာ အရိုးရောဂါခွဲစိတ်ဆရာဝန်များ ဖြစ်ပါသည်။ ရွေ့လျားမှုစနစ်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည့် အရိုးနှင့် ကြွက်သားစနစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးအတွက် တာဝန်ယူပါသည်။ ၎င်းသည် အရိုးများ၊ ကြွက်သားများ၊ အရိုးနုများ၊ အရွတ်များ၊ အဆစ်များနှင့် ကြားဆက်တစ်ရှူးများပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့သည် တစ်ရှူးနှင့် ကိုယ်အင်္ဂါများကို အတူတကွ ထောက်ကူပေါင်းစည်းပေးပါသည်။ အရိုးရောဂါကုသမှု ပရိုစီဂျာများနှင့် ကုထုံးများတွင် ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊​ ကုသခြင်း သို့မဟုတ် မှန်ကန်အောင် ပြခြင်း (ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် ခွဲစိတ်မှုမပါဘဲ) နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် ဇီဝကမ္မကုထုံးတို့ ပါဝင်ပါသည်။ အခြား မတူညီသော အရိုးအကြောဆိုင်ရာ မူမမှန်မှုရောဂါများသည် မတူညီသော ပရိုစီဂျာများ လိုအပ်သောကြောင့် အရည်အသွေးမြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
လူငယ်များတွင် အဖြစ်များသော အရိုးအကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ
ယနေ့ခေတ်လူငယ်များသည် အားစားတွင် စိတ်ပါဝင်စား လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပြီး ကိုးနာရီမှ ငါးနာရီထိ လုပ်ရသော အလုပ်များကို ကတိတဝတ်ပြု လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အရိုးကျိုးခြင်း (ချက်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ဖိစီးမှု)၊​ရှေ့ဘက် ခရူးရှိတ်အရွတ် (ACL) ထိခိုက်မိခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း၊ လက်ချောင်း ထုံကျဉ် နာကျင်သည့် လက္ခဏာစုနှင့် အခြား စသကဲ့သို့ အားကစားနှင့် ပတ်သက်သည့် ထိခိုက်မှုများ အဖြစ်များခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အသက်ကြီးပိုင်းတွင် အဖြစ်များသော အရိုးအကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ
အသက်ကြီးသူများ၏ လည်ပင်းအကြား အခုအခံပြားနှင့် နောက်ကျောအောက်ပိုင်းသည် ပျက်စီးနေပြီး တစ်သက်လုံး ဖြစ်စေနိုင်သည့် မသက်မသာဖြစ်နိုင်လေ့ရှိသော ရေရှည်ခါးနာခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ခါးနာခြင်းကိုသည် ပို၍ ဖြစ်လွယ်ပါသည်။ အသက်ကြီးပိုင်းများတွင် အရိုးများ ကြွပ်လာနိုင်ခြေ များလာပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ပျက်စီးယိုယွင်းလာသော ထိခိုက်များ စုပုံလာခြင်းကြောင့် အရိုးပွခြင်းနှင့် အရိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်းသည် အသက်ကြီးသူများတွင် အဖြစ်ပို၍ များသော အရိုးအကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများထဲမှ နှစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အရိုးရောဂါ ကုထုံးများနှင့် ခွဲစိတ်ကုခြင်းများမှ မည်သည့်အရာကို မျှော်လင့်သနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များပြောဆိုချက်အရ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့ ခွဲစိတ်ကုသမှု မလိုပါသည့် အရိုးအကြောကုထုံးများသည် အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကို ကတိကဝတ်ပြု ပေးအပ်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် အစီအစဉ်၊ အသစ်တွေ့ရှိ နည်းလမ်းများနှင့် စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ နည်းနာသက်သက်နှင့် ၎င်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုပါ။​ သင်သည် ယခင်တစ်ချိန်က ရှိခဲ့သည့် စွမ်းအားနှင့် ပျော့ပျောင်းမှုကို ပြန်လည် ရရှိလာပါလိမ့်မည်။
သင်သည် အရိုးအကြော ခွဲစိတ်မှုတစ်ရပ် လိုအပ်ပါက ခွဲစိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာသည့် အရိုးကြွက်သား ကန့်သတ်ချက်များ ပြင်ဆင်ရန် နှင့် ထိခိုက်မှုမှ ဖြစ်လာသော နာကျင်မှုများကို ဖယ်ရှားရန် အထူး စီစဉ်ထားသည့် အရိုးအကြော ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအတွက် သင့်ကိုယ်သင် ပြင်ဆင်ထားရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များမှ အကြံပြုပေးပါလိမ့်မည်။ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာသည့် အဆင့်အချိန်အများစုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ စိန်ခေါ်မှု ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပြန်လည် ထူထောင်ခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်မျိုးလုံး ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။​ ပြည့်ဝစွာ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာပြီးနောက် သင်သည် မည်သည့်အခါမှ ယခုလောက် ပေါ့ပါးသွက်လက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ပြင် ထိခိုက်မိသော နေရာများတွင် အမာရွတ်များ ရှိလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။​ ခက်ခဲသော အချိန်များသည် ထာဝရ မကြာမြင့်ပါ။​ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာအားလုံးမှာ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက် ရှိရန်နှင့် အကောင်းမြင်စိတ် ရှိရန် ဖြစ်ပြီး သင်သည် အံ့ဖွယ်ပုံကို တစ်ဖန် ပြန်လည် ရရှိလာပါလိမ့်မည်။
အခြား ခွဲစိတ်မှု မတိုင်ခင် နှင့် ပြီးနောက် မျှော်လင့်ထားရမည့် အရာများ –
– ခွဲစိတ်မှုမတိုင်ခင် အနည်းဆုံး ၈ နာရီ အစာမစားရပါ
– ကုသမှုပေးနေသည့် ဆရာဝန်မှ တစ်နည်းအားဖြင့် ညွှန်ကြားချက် မပေးပါက သင် သောက်နေသမျှ ဆေးများအားလုံးကို ယာယီ ရပ်တန့်ထားရမည်
– သင့်အား လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုသည့်အရာများ
– သင့်အား စားခွင့် ပြုထားသည့် အရာများ
မလေးရှားရှိ ပုံရိပ်သုံး ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ် နည်းပညာများ
အရိုးနှင့် ကြွက်သား မူမမှန်ခြင်းများကို ဓာတ်မှန်ကဲ့သို့သော ပုံရိပ်သုံး ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ် နည်းပညာများဖြင့်သာ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။​ မလေးရှားတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးသော ဓာတ်မှန်ရိုက်စက်အချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်သာမက CT စကန်များ၊ အာထရာဆောင်းစက်များနှင့် သံလိုက်သုံး ပဲ့တင်မှု ပုံရိပ် (MRI) စကန်နာများလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အရိုးများမှသည် သွေးကြောများ၊ ပျော့ပျောင်းသော အသားစတစ်ရှူးများနှင့် အရွတ် ပျက်စီးခြင်းနှင့် သေးငယ်သည့် အရိုးခဲခြင်းများအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အတိကျဆုံး ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အံ့ဖွယ်အကောင်းဆုံး ကုထုံးများဖြင့် သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အရိုးရောဂါအားလုံးကို တွေ့ရှိရန် စက်ကြီးများ ရှိပါသည်။
အောက်ပါတို့သည် မလေးရှား၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များမှ အထူးကျွမ်းကျင်သော အရိုးကုသရေးပရိုစီဂျာများထဲမှ အချို့ ဖြစ်ပါသည် –
ဤသည်မှာ အရိုးအကြော ရောဂါရှာဖွေမှု စမ်းသပ်ချက်များ၏ နောက်အဆင့် တစ်ဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ အဆစ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော အရိုးအကြော မူမမှန်မှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် အသုံးပြုပြီး ဤထိုးဖောက်မှု အနည်းဆုံး ခွဲစိတ် ပရိုစီဂျာသည် အဆစ်တွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် အကြောင်းရင်းခံ ပြဿနာကို တိကျစွာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကုသမှု နည်းလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
ii. ဒူးခေါင်းလုံးဝ အစားထိုးခြင်း
ဤခွဲစိတ် ပရိုစီဂျာသည် အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းနာ၊ အမျိုးမျိုးသော ထိခိုက်မှုများ အစရှိသည်တို့ကြောင့် ထိခိုက်မိသော ဒူးခေါင်းအဆစ်များရှိသည့် လူနာများအတွက် ကုသမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။​ အရိုးတုကို ပေါင်ရိုးနှင့် ညို့သကျည်းရိုးတို့၏ အဆုံးကြားတွင် ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ လိုအပ်ပါက အရိုးတုကို ဒူးဆစ် (ဒူးအဖုံး) ၏ မျက်နှာပြင်အောက်တွင်လည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
iii. တင်ပါးဆုံရိုး လုံးဝ အစားထိုးခြင်း
ဤခွဲစိတ်မှုပရိုစီဂျာသည် တင်ပါးဆုံရိုးဆစ် ထိခိုက်မိခဲ့သော လူနာများအတွက် ကုထုံးတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ပါးဆုံ နာကျင်ခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကန့်သတ်စေသောအခါ ဤ ခွဲစိတ်မှုသည် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးလာပါသည်။ ဒူးခေါင်းလုံးဝ အစားထိုးခြင်းကဲ့သို့ပင် ထိခိုက်မိသော အရိုးနှင့် အသားနုများကို အတုဖြင့် အစားထိုးပါလိမ့်မည်။
iv. ဒူးခေါင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်း
ဒူးခေါင်း အစားထိုးခြင်းနှင့် မတူညီဘဲ ဒူးခေါင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်းသည် ဒူးခေါင်းအဆစ်များကိုသာ အတုဖြင့် ပြန်လည် အစားထိုးပါသည်။ အချို့သည် ဒူးခေါင်းလုံးဝအစားထိုးခြင်းထက် ဤနည်းလမ်းကို ပိုနှစ်သက်ကြပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အတုကို ပြန်လည် ကြပ်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် ပြန်လည်ချိန်းဆို ခွဲစိတ်ကုသမှုများ မလိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
v. ပြန်လည် ထူထောင်ခြင်းနှင့် ဇီဝကမ္မကုထုံး
ပြန်လည် ထူထောင်ခြင်းနှင့် ဇီဝကမ္မကုထုံးသည် ခွဲစိတ်မှုပြီးနောက်ပိုင်း ကုသမှု ဖြစ်ပြီး ကာယလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် ဇီဝကမ္မကုထုံးသည်သာ တစ်ခုတည်းသော လိုအပ်သည့် ကုထုံးဖြစ်သော ဖြစ်ရပ်များလည်း ရှိပါသည်။
အရိုးအကြော မူမမှန်မှုများသည် သင့်ဘဝလမ်းကို ဒုက္ခပေးနေသလား။ မလေးရှား၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆေးပညာရှင်များမှ သင့်အား ဤအခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကူညီခွင့်ပြုပါ။ မလေးရှားရှိ အရိုးအကြောကုသရေး၊ ခွဲစိတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ယခုပင် ဆက်သွယ်ပါ။